पाँच करोड हिनामिना आरोपमा तीन पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कृषि विकास बैंक लिमिटेडको झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा बैंकका एक कर्मचारीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा क का उम्मेदवार तथा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य तुलाराम घर्तीमगरलाई लक्षित गरी तिनाउ गाउँपालिका २ खुलखुले नजिकै शनिबार बेलुकी माइन बम विस्फोट गराइएको छ ।
बालाजु बाइपासबाट १० किलोभन्दा बढी अवैध सुनसहित एकजना पक्राउ
रसुवाको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याउँदै गरिएको ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद भएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले बालाजु बाइपासबाट शनिबार साँझ सिन्धुपाल्चोक घर बताउने फूलसिंह तामाङलाई अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको हो । उनले मोटरसाइकलको साइलेन्सरभित्र लुकाएर अवैध सुन काठमाडौं भित्र्याउँदै थिए । प्रहरीले उनले ल्याएको सुन १० किलोभन्दा बढी रहेको अनुमान गरेको छ ।
हत्या र बलात्कारका आरोपी दुईजना पक्राउ
गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले शनिबार दाङमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । शिवगढी गाउँपालिका–३ कपिलवस्तुका २८ वर्षीय माधव पुन पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी डोल्पाका कार्यकर्ताले मुड्केचुला गाउँपालिकाको साइनबोर्ड हटाएर आफ्नो पार्टीको व्यानर टाँस्नुका साथै झन्डा हालेका छन् ।
दाहालले सम्बोधन गरेको सभालाई लक्ष्य गरी बम विस्फोट
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेको सभालाई लक्ष्य गर्दै जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका पकडीमा बम विस्फोट गराइएको छ ।
पार्टी हितविपरीत काम गरको भन्दै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले महामन्त्री रेशमबहादुर लामालाई कारबाही गरेको छ । पार्टीबाट निष्कासनमा परेसँगै उद्योग राज्यमन्त्री लामालाई सरकारबाट समेत हटाइने भएको छ ।
अछाममा नेकपाका ६ कार्यकर्तासहित एक दर्जन व्यक्ति पक्राउ
निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा अछाम प्रहरीले करिब एक दर्जन ब्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरण निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीले निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न ब्यक्ति पक्राउ गरेको हो ।
चापागाउँ ताहाखेलबाट झन्डै एक किमि दक्षिणतर्फ अज्ञात समूहले राखेको बम विस्फोट भएको छ । ताहाखेल बसपार्कमा भइरहेको कांग्रेसको चुनावीसभालाई लक्षित गरी बम बिस्फोट गराइएको हो ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ३ बजनीमा शुक्रबार राति एक दम्पतीको हत्या भएको छ । ३५ बर्षीय दिपक सुवेदी र उनकी पत्नी ३२ बर्षीया दिपिकाको हत्या भएको हो । दिपिकाको बलात्कारसमेत गरिएको छ । उनी निर्वस्त्र अवस्थामा कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
माधव नेपालको चुनाव प्रचारमा दाहाल
एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चुनावी प्रचारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि साथ दिएका छन् ।काठमाडौं– २ का उम्मेदवार नेपालको चुनावी घरदैलोमा शनिबार बिहान सहभागी हुँदै दाहालले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए ।
अखण्ड भण्डारी, दुर्गा खनाल, कुलचन्द्र न्यौपाने, अर्जुन राजवंशी, सन्तोष सिंह
बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाका घर–जग्गा सरकारले कौडीको भाउमा बेच्न ठिक्क परेको थियो । प्रक्रियाको अन्तिम घडीमा ‘झल्यास्स’ भएर रोक्यो । झस्किनुको कारण थियो– प्रयोगविहीन प्रशस्त जमिन र भवनमा कतै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू पो राख्न सकिन्छ कि ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीसहित तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री नेतृत्वको विशेष सैन्य टोलीले तराईका जिल्लाहरूमा निर्वाचन सुरक्षा अवस्था निरीक्षण गरेको छ । नेपाली सेनाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका जिल्लाहरूको विशेष निगरानी गरिरहेका बेला बिहीबार र शुक्रबार प्रधानसेनापति नै ती जिल्ला पुगेका हुन् ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा प्रतिस्पर्धा !
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले वडा नम्बर १६ नगवाको गणेश टोलमा गत शनिबार धर्मशाला शिलान्यास गरे । वडाध्यक्ष श्यामबाबु चौरसिया र मेयर सरावगीले ६० लाख रुपैयाँमा निर्माण हुने धर्मशालाको एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास गरे पनि नगर परिषद्बाट धर्मशाला निर्माण गर्ने योजना भने पारित भएको छैन ।